Heerarka sarrifka lacagaha ee caalamka. Dashboardkaaga shakhsiyadeed leh sicirka sarrifka, jaantusyada iyo daboolka suuqyada ee loo yaqaano lacagta digital. 6010 macluumaadka wakhtiga dhabta ah ee lacagta digital.
USD - US dollar BTC - Seeraar EUR - Euro GBP - Sterling pound JPY - Yen CNY - yuan RUB - Ruble Ruush AUD - Australiyaanka dollar AZN - Iya Manaatadii Azerbaijan ALL - Lek Albanian DZD - Diinaar Algerian XCD - Dollar Caribbean East AOA - Kwanza MOP - Pataca Macanese ARS - Peso Argentine AMD - Dram Armenian AWG - Florin Aruban AFN - Afghani Afghan BSD - Dollar Bahamian BDT - Bangladesh taka BBD - Barbados dollar BHD - Bahrain Diinaar BYR - Ruble Belarus BYN - Ruble Belarus BZD - Belize dollar XOF - CFC faran BMD - Bermuda dollar BGN - Laawiyiintii Bulgarian BOB - Boliviano Bolivia BAM - Bosnia iyo Herzegovina sumadda bedeli BWP - Botswana pula BRL - Dhab Brazil BND - Brunei dollar SGD - Singapore dollar BIF - Burundi oo faran BTN - Bhutan ngultrum INR - Qoondayn Hindiya VUV - Vanuatu vatu HUF - Forint Hungarian VEF - Fuerte Boliver Venezuela VND - Vietnamesse dong XAF - CFC faran HTG - Gourde Haitian GYD - Guyana dollar GMD - Dalasi Gambia GHS - Ghana cedi GTQ - Quetzal Guatemala GNF - Faran Guinea GIP - Gibraltar pound HKD - Hong Kong dollar HNL - Honduran lempira GEL - Lari Joorijiyaan DKK - Taaj Danish DJF - Faran Jabuuti DOP - Dominican peso EGP - Pound Masaarida ZMW - Kwacha Zambia MAD - Dirham Morocco ZWD - Zimbabwean dollar ILS - Sheqelka cusub Israel IDR - Rupiah Indonesian JOD - Urdun Diinaar IQD - Diinaar Ciraaq IRR - Riyaalka Iran ISK - Iceland krone YER - Riyaalka Yemen CVE - Cape Verde escudo KZT - Kazakhstani tenge KYD - Cayman Islands dollar KHR - Riel Kamboodiya CAD - Dollar Canadian QAR - Riyal Qatar KES - Kenya oo shilin COP - Peso Colombian KMF - Faran Comoran CDF - Faran Congo KPW - Won Waqooyiga Kuuriya KRW - Won South Korean RSD - Diinaar Serbian CRC - Costa Rica colon CUP - Peso Cuba KWD - Diinaar Kuwaiti NZD - New Zealand dollar KGS - Som Kyrgyzstani LAK - Lao Kip LVL - Latvia laat LSL - Loti ZAR - Rand LRD - Liberia dollar LBP - Pound Lubnaan LYD - Diinaar Liibiya LTL - Litas Lithuanian CHF - Faran Swiss MUR - Mauritius qoondayn MRO - Ouguiya Mauritanian MGA - Ariary Malagasy MKD - Denar Makedoniya MWK - Malawi kwacha MYR - Malaysin ringgit MVR - Rufiyaa Maldivian MXN - Peso Mexico MZN - Metical Mozambique MDL - Leu Moldova MNT - Tugrik Mongoliyaan MMK - Kyat Burma NAD - Dollar Namibia NPR - Qoondayn Nepal NGN - Naire Nigeria ANG - Gulden Antilliaanse NIO - Cordoba Nicaraguan XPF - Faran Faransiis Pacific NOK - Krone Norwegian AED - UAE dirham OMR - Riyaalka Cumaan SHP - Saint Helena pound PKR - Pakistan qoondayn PAB - Balboa Panama PGK - kina PYG - Guraani PEN - Sol Nuevo Peruvian PLN - Zloty Polish RWF - Faran Rwanda RON - Leu Romania XDR - JDS (Special xuquuqda barbaro) SVC - Colon Salvadoran WST - tala STD - Sao Tome iyo Principe dobra SAR - Riyal Saudi SZL - lilangeni TRY - Boqalaal New Turkish SCR - Seychelles qoondayn SYP - Pound Suuriya SKK - Slovak koruna SBD - Sulaymaan Islands dollar SOS - Oo shilin Soomaali SDG - Pound Sudan SRD - Surinam dollar SLL - leone TJS - Somoni Tajikistani THB - Baht Thai TWD - Taiwan dollar cusub TZS - Shilinka Tansaaniya TOP - pa`anga TTD - Trinidad and Tobago dollar TND - Diinaar Tunisia TMM - Turkmenistan Manaatadii TMT - Turkmenistan Manaatadii cusub UGX - Uganda oo shilin UZS - Uzbekistan wadarta UAH - hryvnia UYU - Peso Uruguay FJD - Fiji dollar PHP - Filibiin peso FKP - Falkland Islands pound HRK - KUNA Croatian CZK - Koruna Czech CLP - Peso Chile SEK - Kroon Swedish LKR - Sri Lanka qoondayn ERN - nakfa ETB - Birr Itoobiya JMD - Dollar Jamaica SSP - Pound South Sudan CLF - Chile Unidad de Fomento EEK - Kroon Istooniyaan GGP - Guernsey pound IMP - Manx pound JEP - Jersey pound MTL - Boqalaal Malta XAG - 1 ounce troy oo lacag ah XAU - ounce 1 troy dahab ah (oo dahab electronic / dahab electronic) ZMK - Kwacha Zambia ZWL - Zimbabwe dollar ATS - Shilin Austria AON - Kwanza cusub Angola BEF - Faran Belgian GRD - Lumiso Greek IEP - Pound Irish ESP - Peseta Spanish ITL - Lire Talyaani CYP - Cyprus pound DEM - Deutsche sumadda NLG - Netherlands guilder PTE - Escudo Portuguese SIT - Tolar Slovenia SRG - Surinam guilder FIM - Sumadda balan kalluun FRF - France bashaash ECU - ECU YUM - Diinaar cusub Yugoslaviyadii
BTC = 33 536.79 USD
571 022 127 880.43 US dollar
-74 059 779 720.48 USD (-11.48%)
ETH = 1 267.10 USD
132 071 255 559.38 US dollar
-20 495 451 615.73 USD (-13.43%)
12 009 351 114.56 US dollar
-1 580 226 770.28 USD (-11.63%)
BCH = 449.47 USD
Bitcoin Cash qiimaha sicirka
7 774 384 751.88 US dollar
-1 297 541 424.89 USD (-14.30%)
EOS = 2.67 USD
EOS qiimaha sicirka
2 387 622 828.25 US dollar
-180 444 717.61 USD (-7.03%)
Sicirrada sarrifka lacagaha ah ee internetka, qiimaha waqtiga dhabta ah.
Jaantusyada taariikhda lacagaha. Sicirrada sarrifka ah, taariikhda qiimaha lambarrada.
Ku kala sarreeya suuqa dukaameeysan: ugu rajo-gelinta, lacag cusub oo la isku halleyn karo oo aad u sareeya.
Dhamaan lacagta digital qiimaha celceliska maanta.
Dhamaan shaati-barafka oo qiimaha ugu fiican maanta.
Qiimaha sarrifka 'cryptoptorency' ee websaydhkeenna waxay muujinayaan qiimaha hadda jira ee nooc kasta oo loo xushay aaladaha lacagta maanta. Qiimaha sarrifka lacagaha 'cryptoptorency' waxaa loo xisaabiyaa sidii celcelis ahaan qiimaha suuqyada crypto ee adduunka oo dhan halka maanta looga ganacsado lacagta digital. Waxaad raaci kartaa heerka sarrifka lacagaha elektiroonigga ah si aad u hesho sicirka sarrifka lacagaha ee ugu wanaagsan ee loo iibsado iyo wax lagu iibiyo.
Qiimaha sarrifka lacagta digital ee bartayada ayaa dib loo cusboonaysiiyaa 30 ilbiriqsi kasta. Baro sicirka sarrifka 'crypto' khadka tooska ah ee tooska ah isla markaana ah waqtiga dhabta ah.
Qiimaha sarrifka lacagta digital waxaa lagu ganacsadaa isweydaarsiga crypto-kala duwan iyo suuqyada-suuqyada. Si ka duwan lacagtii caadiga ahayd, qofna ma cayimin qiimahiisa maanta ama berri. Isweydaarsiga kasta ee lacagaha 'lacagta digital', heerka sarrifka lacagaha 'lacagta digital' wuxuu is beddelaa waqtiyo kala duwan. Si aad si sax ah u fahamto heerka lacagta digital, hadda waxaad u baahan tahay inaad si dhakhso leh u xisaabiso qiimaha celceliska qiimaha sarrifka ee dhammaan suuqyada crypto.
Cryptoratesxe.com waxay xisaabisaa celceliska isku-darka sarrifka lacagaha lacagta digital ee suuqyada crypto oo dhan.
Isweydaarsiga lacagaha 'cryptoptorency', sicirka khadka tooska ah
Waxaan si joogto ah ula soconaa 6010 sicirka sarrifka lacagta digital ee dhammaan suuqyada crypto adduunka.
Waad raadraaci kartaa heerka sarrifka ee hal lacagta digital qaraabo mid kale adiga oo adeegsanaya gole shaqsiyeed. Xaddiga loo yaqaan 'crypto crypto' waxaa lagu soo bandhigaa qaab garaafyo iyo lambaro ah, isbeddelada sicirka waxaa lagu soo bandhigaa goob gaar ah boqolkiiba. Kororka Lacagta digital iyo hoos u dhaca lacagta digital ayaa lagu muujiyey midabbo kala duwan.
Qiimaha sarrifka ugu fiican ee 'lacagta digital'.
Qiimaha sarrifka ugu wanaagsan ee 'lacagta digital' waxaa lagu baran karaa shaxanka isbeddelka deg-degga ah ee heerka lacagta digital ee ku yaal daaqadaha goobta ama bogga sarrifka ee internetka ee doorta 'lacagta digital'. Marka xaddiga lacagta digital muujiso qiimaha ugu yar - tani waa waqtiga ugu wanaagsan ee wax iibsashada, iyo marka lacagta digital ay gaarto heerka sarrifka ugu badan - waa waqtiga ugu fiican iibka crypto.
Bitcoin sicirka sarrifka ee maanta 22 January 2021
Heerka sarrifka ee Bitcoin maanta waa macluumaadka aasaasiga ah ee dadka badankood adeegsadaan. Waxaad ka ogaan kartaa xaddiga Bitcoin ee maanta loo yaqaan 'lacagta digital' iyo lacag kasta oo adduunka ah bartayada internetka.
Waxaan muujinnaa sicirka beddelka dhammaan lacagaha loo yaqaan 'aaladaha lacagta' maalin kasta waana ognahay sicirka ma ahan oo keliya maanta, laakiin sidoo kale maalin kasta.
Bitcoin sicirka sarrifka lacagta digital ee berri 23/01/2021
The Bitcoin Qiimaha sarrifka lacagta digital ee berri, 23/01/2021 waxaa lagu sameeyay celcelis ahaan qiimaha maalin kasta iyadoo lagu saleynayo Bitcoin ka ganacsiga isweydaarsiga crypto maanta. Berri Bitcoin sicirka sarrifka ayaa salka u ah isdhaafsiga Bitcoin meelaha is-weydaarsiga ee on 23/01/2021.
Markaa, adiga oo kormeeraya isbeddelada Bitcoin ee isweydaarsiga websaydhka inta lagu jiro maalinta, waxaad saadaalin kartaa sicirka Bitcoin berrito iyo isdhaafsiga sicirrada Bitcoin qadka isdhaafsiga berrito 23/01/2021.
Samee Bitcoin gudiga dabagalka bogga ugu weyn ee shabakada sarrifka lacagaha 'lacagta digital' oo daawo qeybta Bitcoin qadka khadka tooska ah. Waxaad had iyo jeer si sax ah u qaadan doontaa sicirka Bitcoin berrito.
Heerka sarrifka ee Bitcoin ka dhanka ah dollar maanta
Bitcoin oo u sarrifka doollar maanta waa midka ugu weyn Qiimaha sarrifka ee suuqa adduunka Bitcoin Waa sicirka sarrifka Bitcoin oo ka soo horjeedda doollar go'aaminaya heerka sarrifka Bitcoin ka dhanka ah lacagaha kale.
Waxaad ku arki kartaa heerka sicirka Bitcoin doollarka halkaan ka ah .
Heerka sarrifka ee Bitcoin ee ka dhanka ah euro maanta
Heerka sarrifka ee Bitcoin ee lacagta euro ee maanta ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay websaydhka 'cryptoratesxe.com'
Bitcoin ilaa heerka Euro maanta - shaxanka Bitcoin ee Euro waa iskucelcelis dhammaan isweydaarsiga crypto.
Bitcoin sarrifka lacagaha ee euro sida mid ka mid ah lacagaha ugu waaweyn adduunka ayaa go'aaminaya Bitcoin sicirka sarrifka lacagaha kale ee adduunka. Raadso Bitcoin sicirka sarrifka ee maanta dashboard-ka websaydhka ee websaydhka.
Heerka sarrifka ee Ethereum ka dhanka ah dollar maanta
Ethereum ilaa heerka sarrifka doolarka ee maanta - celceliska Ethereum sicirka sarrifka ayaa hadda ah dhammaan suuqyada adduunka crypto. Heerka Ethereum ee doolarka ayaa go’aaminaya heerka Ethereum sicirka lacagaha kale iyo aaladaha lacagta.
Waxaad ku arki kartaa heerka sicirka Ethereum doollarka halkaan ka ah .
Heerka sarrifka ee Ethereum ee ka dhanka ah euro maanta
Heerka sarrifka ee Ethereum ee lacagta euro ee maanta ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay websaydhka 'cryptoratesxe.com'
Ethereum ilaa heerka Euro maanta - shaxanka Ethereum ee Euro waa iskucelcelis dhammaan isweydaarsiga crypto.
The Ethereum sarrifka lacagaha euro iyo doollarka sida lacagaha ugu waaweyn adduunka ay aasaas u yihiin Ethereum qiimee dhamaan lacagaha adduunka. La soco Ethereum ee maanta ku jira dariiqyada tooska ah ee websaydhka.
Heerka sarrifka ee Litecoin ka dhanka ah dollar maanta
Sicirka sarrifka Litecoin ilaa doollarka maanta - celceliska celceliska Litecoin hadda waa xaraashka isweydaarsiga crypto. Heerka Litecoin doolarka wuxuu go’aamiyaa sicirka Litecoin ee lacagaha kala duwan iyo aaladaha lacagta.
U fiirso Litecoin si aad u sarrifto doollarka qadka halkan halkan .
Heerka sarrifka ee Litecoin ee ka dhanka ah euro maanta
Sicirka sarrifka Litecoin ilaa Euro maanta ayaa lagu muujiyay halkan bog gaar ah.
Litecoin sarrifka lacagta euro ee maanta - khadka tooska ah ee Litecoin sicirka euro waa celceliska isweydaarsiga lacagta digital.
The Litecoin sarrifka lacagaha euro iyo doollarka sida lacagaha ugu waaweyn adduunka ay aasaas u yihiin Litecoin qiimee dhamaan lacagaha adduunka. La soco Litecoin ee maanta ku jira dariiqyada tooska ah ee websaydhka.
Heerka sarrifka ee XRP ka dhanka ah dollar maanta
Eeg heerka XRP qiimaha doollarka ee ku jira doollarka .
Heerka sarrifka ee XRP sarrifka dollar maanta - celcelis ahaan XRP heerka hadda wuxuu ku jiraa ganacsiga crypto. Heerka XRP ee doolarka ayaa go’aaminaya sicirka XRP dhamaan lacagaha kale iyo lacagaha kale.
Heerka sarrifka ee XRP ee ka dhanka ah euro maanta
Qiimaha sarrifka ee XRP ilaa Euro ee maanta ayaa lagu muujiyey bog kale.
XRP qiimee euro ilaa maanta - the XRP qadarka euro ee khadka tooska ah waa celceliska isweydaarsiga lacagta digital.
The XRP sicirka euro iyo dooliga maadaama lacagaha ugu waaweyn ay yihiin aasaaska XRP qiimeynta dhammaan lacagaha kale. Raac kuwa XRP sicirka maanta ee heerarka sarrifka saamiyada bartayada internetka qadka.